Uphengululo lweSmartdrone BT, idrone enkulu epokothweni | Iindaba zeGajethi
Uhlalutyo lwe-Smartdrone BT, idrone enkulu epokothweni
UMiguel Gaton | | Reviews
Namhlanje sikubonisa i-minidrone ebesiyivavanya kangangeentsuku ezininzi kwaye isishiyile incasa elungileyo. Igama lakhe ngu I-Smartdrone BT kwaye ngu minidrone epokothweni okwangoku Iyathengiswa eJuguetronica nge € 39,89. Ilawulwa yi-smartphone kunye ne-app ethile kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa ke ngokuqinisekileyo kuyonwabisa uninzi lwabaqhubi beenqwelo moya. Masibone zonke ezinye iinkcukacha zale fowuni.
1 Kumnandi kakhulu ukuqhuba
3 Khuphela usetyenziso
6 Ifoto yegalari
Kumnandi kakhulu ukuqhuba
I-Smartdrone BT yinto emnandi ukubhabha kwabo banamava amancinci okubhabha. Enkosi Ku inkqubo yokulawula ubude wonke umntu angaba nobuganga ngale drone ngaphandle kokoyika ukuwa nokwaphula. Ukongeza, inezantya ezininzi ukuze xa umqhubi efumana ukuphumla kancinci, aqhubeke nokusebenzisa i-drone ngaphandle kwesidingo sokutshintsha ngokukhawuleza kwimodeli ethe kratya. Kanjalo ivumela ukujika okungu-360º nee-pirouettes, into encinci yendlu ihlala iyithanda.
Ukuqala ukusebenza nge-BT kufuneka uhlawule ibhetri, khuphela usetyenziso kwi-smartphone yakho (Uhlobo lwe-iOS kunye ne-Android luyafumaneka) kwaye uqalise ukuqhuba. Awudingi isikhululo salo naluphi na uhlobo, i-smartphone yakho iya kusebenza njengomlawuli wokuqhuba le mini yedrone ngaphandle kwengxaki.
Ukuhamba ngenqwelomoya kumnandi kakhulu. I-smartdrone iphendula kakuhle kulawulo kwaye ibhabha ngokukhawuleza ukuba uyibeka kwimowudi yokuqhubela phambili yokulinga. Ngokufanelekileyo ngenxa yobukhulu bayo kunye nobunzima bayo yidrone leyo yenzelwe ukusetyenziswa endlwini okona kuncinci komoya kuya kukubangela ukuba uphulukane nolawulo kwaye ungangqubeka. Ukuba uza kuyisebenzisa ngaphandle, naka ingqalelo ekukhetheni usuku ngaphandle komoya okanye ngekhe ukwazi ukuqhuba. Ikwanayo ukuze ukwazi ukulawula idrone ngokuguqula i-smartphone yakho.
Kuza kucwangcisiwe ukusuka izibane ezimbini zokuma, ebomvu ibekwe ngasemva ize eluhlaza okwesibhakabhaka ngaphambili, ukuze sihlale siyazi apho ujonge idrone kunye nokubaleka kwakho kuya kuba lula. Ibhetri luhlobo lweLiPo kunye Ihlala malunga nemizuzu esi-8 malunga.
Kwibhokisi yedrone siya kufumana:
I-Smartdrone BT yokulinganisa i-8.3 x 2 x 8.3 cm
ibhetri enye ye-3.7V 150 mAh LiPo
Isikhokelo somsebenzisi okhawulezayo
Ukudlala nge-Smartdrone BT kuya kufuneka ukhuphele esi sicelo kwi-iPhone yakho okanye kwi-Android.
UKUQALA KWE-SMART BT JUGUETRONICA
Kubandakanya imo ye-g-sensor
Siphoswa yingxowa yezothutho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lwe-Smartdrone BT, idrone enkulu epokothweni
I-ZTE ihambisa ithokheni ukuba isebenze eUnited States
Kidy: Injini yokukhangela ekhuselekileyo yabantwana